Imisongo yabadala: iincakuba ziphuma kwi-beta kwi-android nakwiios
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Imisongo yaBadala: Iibhlethi ziphuma kwi-beta kwi-Android nakwi-iOS
Imisongo yaBadala: Iibhlethi ziphuma kwi-beta kwi-Android nakwi-iOS
Emva kweenzame ezininzi ezingaphumelelanga, i-Bethesda & apos; ukuthatha kuqala iiScrolls zaBadala kwiselfowuni ekugqibeleni kuphuma kwi-beta. Kunye noHlaziyo lwe-1.7, Abadala beScrolls: Iibhleyidi ziphume kwi-beta kwizixhobo ze-Android kunye ne-iOS, ke ukuba wena & apos belilinde ukukhutshwa ngokupheleleyo, ngoku ingalixesha elifanelekileyo lokuba uqale i-adventure yakho kwilizwe elinomdla le-Elder Scrolls.
Abo badlale umdlalo wokufikelela kwangoko kumdlalo baya kufumana umvuzo okhethekileyo: iigugu ezili-150 kunye nomhombiso omkhulu we-Emblem. Kwakhona, ibhodi yabaphambili yeArena iya kuseta kwakhona kwaye imivuzo emitsha ngoku iya kufumaneka kwabo banyukayo. Iibhodi zebhodi yabaphambili yinto entsha enika abadlali ithuba lokubona ukuba iGuild yabo imi phi phakathi kokhuphiswano.
Uhlaziyo olutsha lwe-1.7 luzisa umgca omtsha wokudlala odlala njengemowudi ye-Blades 'PvP Arena, kwaye akukho ngaphantsi kweminye imibuzo emitsha ejolise kubadlali abakwinqanaba eliphantsi kunye nakwinqanaba eliphezulu. Umthwalo wamanzi wokulungiswa kwe-bug wongezwa nawo, kunye notshintsho olongezelelekileyo olufana neziphumo ezitsha zesandi kwizixhobo.
Imisongo yabadala: Iibhleyidi ziyafumaneka simahla nge Ivenkile yeGoogle Play kwaye Ivenkile yeApple , kodwa ayihambelani nazo zonke izixhobo. Ukuba uyasibetha isixhobo se-iOS, kuya kufuneka ukhuseleke ukuba unayo enye yezi zixhobo zilandelayo: I-iPhone SE, 6S, 7, 8, X, XS, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPad Mini 4, Mini 5, iPad Air 2, Air 2019, iPad 2017-19, kunye nePad Pro. Nangona kunjalo, umdlalo awusebenzi kwi-iPhone 5s, 6, 6 Plus, iPad Air, Mini 2, Mini 3, kunye ne-iPod Touch.
Ukuya kuthi ga ngokuhambelana kwe-Android, iMisongo yaBadala: Iibhleyidi kufuneka zisebenze malunga nayo nayiphi na iifowuni eziphakathi kunye neziphezulu kunye nezinto ezimbalwa ezinje ngeHTC U11 Life, Moto Z2 Play, kunye neMoto Z3 Play.
Indawo ye-droid maxx sd yekhadi
Inqanaba lebhokisi yesamsung ukuphononongwa okuncinci
I-Apple yetsiba i-USB-C kwi-iPhone 12 / Pro 5G ngaphambi kokuhamba ngaphandle konyaka ozayo
IJava Loop ngokusebenzisa uLuhlu
Ngaba iPUBG Mobile igcwele i-bots?
I-Android 5.0 ikuvumela ukuba uvule kwaye ucime isibane sakho, iWi-Fi kunye neBluetooth ngokusebenzisa imiyalelo kaGoogle ngoku
Idili: I-LG Stylo 6 kunye ne-Samsung Galaxy A21 zisimahla kwiMetro yiT-Mobile (xa utshintsha)
Yintoni indima yoMphathi weQA?
I-LG Stylo 6 ixabisa i-120 yeedola nje kwiVerizon (imigaqo kunye neemeko ziyasebenza)
Umhla wokukhutshwa kwe-LG G7 ThinQ ibhengezwe ziziphathamandla ezimbini zaseMelika
Ezona zikhuseli zibalaseleyo zeGoogle Pixel 5